तपाइ पनि दिने होइन् त १० प्रतिशत व्याजमा राष्ट्रलाई ऋण ? — News of The World
तपाइ पनि दिने होइन् त १० प्रतिशत व्याजमा राष्ट्रलाई ऋण ?
२९ जेठ, काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले २५ करोड रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक रोजगार बचतपत्र निश्काशन गर्ने भएको छ । यसि असार १ गतेदेखि २१ गतेसम्म बिक्री खुला गरिने वचतपत्र पाँच वर्ष अवधिको हुनेछ भने पाँच वर्षपछि साँवा भुक्तानी दिइने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
वैदेशिक लगानी वचत पत्रमा वार्षिक १० प्रतिशत ब्याज दिइने र ब्याज भुक्तानी ६–६ महिनाको अवधिमा गरिने पनि राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । उक्त वचत पत्रका लगानीकर्ताले वचतपत्र बैंकमा धितो राखेर ऋण लिन वा बीचैमा बेचविखन गर्न पनि पाउने छन् ।
वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाहरु तथा विदेशको रोजगारीबाट फर्केको ४ महिना नपुगेका ब्यक्तिहरुले सो वचत पत्रमा लगानी गर्न पाउने छन् । यस्तै गैर आवासीय नेपालीहरुले पनि आफू वा परिवारका सदस्यहरुको नाममा उक्त वचत पत्रमा लगानी गर्न पाउने छन् ।
वैदेशिक रोजगार वचतपत्रमा लगानी गर्न चाहनेहरुले माछापुच्छे बैंक लाजिम्पाट, सिटिजन्स् बैंक कमलादी, एनएमबी बैंक बबरमहल, नबिल बैंक तीनधारा, प्रभु बैंक अनामनगर, सनराइज बैंक गैह्रीधारा, सिद्धार्थ बैंक हात्तिसार, सेञ्चुरी बैंक पुतलीसडक, प्रभु मनि ट्रान्सफर लैनचौर, सानिमा बैंक नक्साल, सिटी एक्सप्रेस मनि ट्रान्सफर कमलादी र सेवा रेमिट कुलेश्वरबाट आवेदन दिन सक्ने पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।